आर्थिक Archives – Page7of 235 – Samacharpati Samacharpati आर्थिक Archives – Page7of 235 – Samacharpati
घट्याे सुनको मूल्य !
काठमाडौँ, २१ पुस । नेपाली बजारमा साताको अन्तिम दिन सुनको मूल्य घटेको छ । बिहिबार तोलामा ९५ हजार ४०० मा कारोवार भएको छापावाल सुनको मूल्य आज एक सय रुपैयाँले घटेर प्रतितोला ९५ हजार ३०० मा कारोवार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । त्यस्तै आज तेजाबी सुन प्रतितोला रु ९४ हजार ८०० मा कारोवार […]
काठमाडाैँ, २४ पुस । सरकारले छिमेकी मुलुक भारतबाट आउने पशुपंक्षीजन्य वस्तुको आयातमा रोक लगाउन तयारी गरेको छ । भारतमा बर्डफ्लु देखिएपछि नेपालमा समेत आउनसक्ने भन्दै पशु सेवा विभागले पशुपंक्षीको आयातमा रोक लगाउन लागेको हो । सार्वजनिक सूचना निकालेर आयातमा रोक लगाउने तयारी विभागको छ । भारतमा बर्डफ्लु देखिएपछि नेपालमा समेत आउन सक्ने भएकाले उच्च सर्तकता […]
पोखरा, २३ पुस । गोल्डस्टारको नयाँ स्वरुम पृथ्वीचोकमा संचालनमा आएको छ । राजन केसी र स्वस्तिका केसीले उक्त स्वरुम संचालनमा ल्याएका हुन् । दुई वर्ष अघि सिदार्थचोकमा स्थापना गरिएको गोल्डस्टारको अपार सफलता पछि अब पृथ्वीचोकबाट समेत सेवा प्रवाह गरिने भएको हो । विहिबार चलचित्र पत्रकार संघ कास्कीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मलेनमा स्वरुमको विषयमा जानकारी दिँदै […]
खोटाङ, २३ पुस । महिना दिन नपुग्दै पवित्र धार्मिकस्थल हलेसी मन्दिरमा रु साढे पाँच लाखभन्दा बढी भेटी सङ्कलन भएको छ । कोरोना महामारीका कारण बन्द गरिएको मन्दिर आठ महिनापछि खुला गरिएको थियो । हिन्दू, बौद्ध र किराँत धर्माबलम्बीको पवित्र आस्थाका केन्द्र हलेसीमा गत मङ्सिर १६ गतेदेखि यही पुस ८ गतेसम्मका अवधिमा दर्शनार्थी तथा पर्यटकबाट रु […]
घट्याे सुनको मूल्य कति पुग्याे ताेलामा !
काठमाडौँ, २३ पुस । नेपाली बजारमा बिहिबार सुनको मूल्य घटेको छ । बुधबार प्रतितोला ९६ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य आज १३ सय रुपैयाँले घटेर प्रतितोला ९५ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यावसायी महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य ९४ हजार ९ सय निर्धारण गरिएको […]